China LEDB620 Wall Type LED fandidiana fandidiana avy amin'ny mpamokatra mpanamboatra sy mpamatsy | Wanyu
LEDB620 Wall Type LED fandidiana fandidiana avy amin'ny mpamokatra
Ny jiro fandidiana LED620 dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
LEDB620 dia manondro tselatra fandefasana rindrina.
■ ent / omf / Ophthalmology
1. Natao ho an'ny efitrano ambany valindrihana
Ny efitrano fandidiana sasany dia ambany ny haavon'ny gorodona na ny faritra kely, izay tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny efitrano fandidiana amin'ny valindrihana. Azonao atao ny misafidy ity varatra fandidiana karazana rindrina ity.
2. Fiadiana lohataona mahaleo tena
Ny firafitry ny jiro fandidiana karazana rindrina dia mifanaraka tanteraka amin'ny jiro fandidiana amin'ny valindrihana, miaraka amin'ny lohataona tsy miankina sy ny sandry mihodina, izay samy namboarina ara-drafitra avokoa.
Manome karazana sandry lohataona roa hisafidianan'ny mpanjifa izahay. Ny iray dia ny sandry lohataona ondal nampidirina tany am-boalohany, ary ny iray kosa dia ny sandry lohataona novolavolainay taorian'ny fanavaozana sy fanatsarana ny sandan'ny lohataona ondal.
Ny vidiny samihafa dia mifanaraka amin'ny filan'ny hopitaly miaraka amin'ny teti-bola samihafa.
4. Endo Mode
5. Lensa novolavolain'ny tena
Tsy mitovy amin'ireo mpamokatra hafa izay mividy solomaso tsotra, dia manambola be izahay mba hampivelatra ny mason-tsivana tsy manam-paharoa amin'ny fampisehoana condensing tsara kokoa. Ny takamoa LED tsirairay miaraka amin'ny solomaso misy azy, mamorona sahan-jirony manokana. Ny fipetrahan'ny tara-pahazavana hafa dia mahatonga ny toerana maivana ho mitovy sy mampihena be ny tahan'ny aloka.
6. Volam-by LED avo lenta
Tselatra fandidiana amin'ny rindrin'ny LEDB620
Previous: Jiro fiasa LEDB500 mitaingina rindrina miaraka amin'ny mari-pahaizana CE
Manaraka: LEDB730 Fametahana rindrina LED Jiro OT miaraka amin'ny sandry voatonona